नेपालीहरुलाई चौकीदार भन्ने भारतीय सांसदले माफी माग्दैं यस्तो भनिन् ! « The News Nepal
नेपालीहरुलाई चौकीदार भन्ने भारतीय सांसदले माफी माग्दैं यस्तो भनिन् !
काठमाडौं । भारतमा लोकसभा निर्वाचन नजिक आउँदैं गर्दा राजनीतिक गर्मि बढ्दैं गएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफुलाई प्रधानमन्त्री भन्दा भारतको चौकीदारको रुपमा हेर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँको यस अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतमा अनेक चर्चा हुने गरेका छन् । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले चौकीदार चोर भएको भनेपछि चौकीदार विषयले चर्चा पाएको छ । यो बिचमा दिल्लीकी सांसद अल्का लाम्बाले नेपाल र नेपालीबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिका लागि माफी माग्नु भएको छ ।
मंगलबार बिहान गरेको ट्वीट निकै नै विवाद र आलोचीत भएपछि लाम्बाले माफी माग्दैं उक्त सामाग्री हटाउनु भएको छ । उहाँले माफी माग्दै लेख्नु भएको छ, ‘मेरो एउटा ट्वीटबाट नेपालीहरुलाई दुःख लागेको थाहा भएको छ । म यसका लागि छिमेकी देश नेपालका नागरिकसँग माफी चाहन्छु । मेरो उद्धेश्य कसैको मन दुखाउनु थिएन । मैले तपाईँहरुको भावनाको कदर गर्दै ट्वीट हटाएकी छु । गड ब्लेस इन्डिया–नेपाल फ्रेन्डसिप ।’
आम आदमी पार्टीकी नेतृ तथा दिल्ली विधानसभा सदस्य अल्का लाम्बाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दा नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । उहाँले ट्विटरमा मोदीलाई कटाक्ष गर्दै लेख्नु भएको थियो, ‘प्रिय, भारतवासी, यो पटक प्रधानमन्त्री नै चुन्नुहोला । चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन् ।’ उहाँको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि नेपालमा तिब्र विरोध पनि भएको थियो ।